प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐन : जरीवाना घटाउन दबाब | गृहपृष्ठ
Home समाचार प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐन : जरीवाना घटाउन दबाब
on: १४ भाद्र २०७५, बिहीबार ०९:०० समाचार
प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐन : जरीवाना घटाउन दबाब
काठमाडौं । प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण ऐन– २०७५ मा तोकिएको दण्ड जरीवाना घटाउन सरकारलाई दबाब पर्न थालेको छ । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ठूलो दण्ड जरीवानाले व्यवसायीमैत्री वातावरण भङ्ग हुने भन्दै सरकारलाई दबाब दिन थालेका हुन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकप्रति असहमति राख्दै सांसदहरूले जरीवाना घटाउनेदेखि अनुगमन संयन्त्रमा व्यवसायीलाई राख्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
सत्तारुढ दलका सांसद रामवीर मानन्धरले प्रस्तावित ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ को (क) मा बिलबिजक नराखेमा रू. ५ हजारदेखि २० हजारसम्म जरीवाना तोकिएकोमा त्यसलाई परिवर्तन गर्न संसद्मा संशोधन दर्ता गराएका छन् । सो जरीवानाको सट्टा हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना राखिनुपर्ने उनको माग छ । सोही दफाको उपदफा १ को ‘ख’ मा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी कसैले झुक्काएर बेचेमा रू. २ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरीवानाको व्यवस्था गरिएकोमा सो जरीवाना घटाउनुपर्ने सांसदको माग छ ।
सांसदद्वय मानन्धर र रामबहादुर विष्टले संशोधन दर्ता गर्दै सो व्यवस्थाको ठाउँमा ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भीमसेनदास प्रधान र मानन्धरले सोही दफाको उपदफा १ को ‘घ’ र ‘ङ’ मा हाल प्रस्ताव गरिएको जरीवाना घटाउन माग गरेका छन् । ‘घ’ मा सेवादाताले स्पष्ट मूल्यसूची नराखेमा ५० देखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना हुने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छ । त्यसको सट्टटा १० देखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना राख्न उनीहरूको माग छ । दफा ३८ को उपदफा १ को ‘ङ’ मा अनुचित व्यापार व्यवसाय गर्ने गराउनेलाई २० हजार जरीवाना तोकिएकोमा त्यसलाई बढाएर ५० हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरिएको छ ।
सांसद मानन्धरले विधेयकको दफा २७ को उपदफा २ मा अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा व्यवसायीका प्रतिनिधि नराखिएकोमा असहमति व्यक्त गर्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन् । सांसद प्रेम सुवालले उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र उपाध्यक्षमा गृहमन्त्री रहने र सदस्यमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका सबै राजनीतिक दल थप गरी मिलाउनुपर्ने प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । प्रस्तावित ऐनप्रति संशोधन दर्ता गराउने अन्य सांसदमा भरतकुमार शाह, वृजेशकुमार गुप्ता, घनश्याम खतिवडासहित १० जना छन् ।
प्रस्तावित ऐनमा भएको जरीवाना घटाउन र अनुगमनका निम्ति बनाइएको संयन्त्रमा व्यवसायीसमेत समावेश गर्न सांसदहरूले गरेको मागलाई उपभोक्ता अधिकारकर्मीले विरोध गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले अभियानसँग कुराकानी गर्दै जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिले व्यवसायीलाई फाइदा पुग्नेगरी ऐन ल्याउन लबिङ गर्नु दुःखद भएको बताए । उनले भने, ‘हालको जरीवानालाई फेरबदल गरिए ऐनको औचित्य रहनेछैन । यो सरकारले उपभोक्ता अधिकारको रक्षा गर्न नसकेको पुष्टि हुनेछ ।’
ऐनमा संशोधन दर्ता गराएका सांसद रामवीर मानन्धरले जरीवानाको मात्रा अधिकतम तोकेर बजारमा रहेको बेतिथि अन्त्य नहुने बताए । उनले भने, ‘कानून बलियो बनाउने हो, जरीवाना होइन ।’ उनका अनुसार यही ऐन जस्ताको तस्तै पारित गरिए जरीवानालाई देखाएर कार्मचारीहरूले व्यवसायीलाई तर्साउने बाटो खुल्नेछ । त्यसबाट व्यवसायीमैत्री वातावरण भङ्ग हुने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ ।